Application Help /အခမဲ့ Video Chat Conferendo
Download နှင့် Install
video call တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း
call ကို အဆုံးသတ်ခြင်း
Group video conference "၂ x၁၂၀"
စာသား chatting စတင်ခြင်း
Video conference ၏ မှတ်တမ်း (Record and play back video)
Micophone နှင့် sound ပြဿနာများကို ရှာဖွေခြင်း
ကျွန်ုပ်၏ video messenger ကို ရွေးချယ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Conferendo ကို အသုံးပြုလျက် video communication ကို စတင်ရန် ၊ဤ manual က သင့်အား ရိုးရှင်းသော လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။
Loading of messenger 's setup file
သင့်ထံတွင် client ရှိနေသေးလျှင် ၊ Conferendo အဓိက စာမျက်နှာ (main page) ကို သွားပါ။ video messenger နောက်ဆုံး version ကို ရရှိရန် "Free Download" ကို click ပါ။
messenger's setup file ကို "Download" page ပေါ်တွင် download ပြုလုပ်နိူင်ပါသေးသည်။
၎င်း file အား download ပြုလုပ်ပြီးသောအခါ ရိုးရှင်းသော ညွန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပြီး ၎င်းကို run ပါ။လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး(၁) မိနစ်မျှသာကြာပါသည်။
အစဦး အစိတ်အပိုင်းများဖွဲ့ စည်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် login dialog ကို တခြားအချိန်တွင် open ချင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ Conferendo -> login on the application menu bar(Main menu)ကို select လုပ်ပါ သို့မဟုတ် application ထဲတွင် logged in ဖြစ်မနေစဉ်အတွင်း application toolbar(Tool bar)ပေါ်ရှိ လွတ်နေသော button တစ်ခုခုကို click ပါ။
သင်သည် Conferendo user အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပြီးပါက၊သင်၏ ID နှင့်စကားဝှက် ကို ကိုက်ညီသည်။ Fields များ ထဲသို့ ထည့်ပါ။Ok ကို click ပါ။System ထဲသို့ သင်ဝင်ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။
သင်ထံတွင် သင်၏ login သတင်းအချက်အလက်များ မရရှိသေးပါကသင်၏ Conferendo ID ကိုရယူပါ button ကို click ပါ။မှတ်ပုံတင် Form ကိုဖြည့်ပါ။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပဲ Conferendo service ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို ရှာဖွေခြင်း
စကားပြောဖို့ လူရှာဖွေရန် main menu မှ ကျွန်ူပ်၏ Conferendo -> open community ကိုသွားပါ။သို့ မဟုတ် သင်၏ text messenger’s window ၏ညာဘက်တွင်ရှိသော toolbar ပေါ်ရှိ button ကို click ပါ။၎င်းသည် သင့်အား သင်နှင့် chat မည့် တစ်စုံတစ်ယောက် ကို ရှာဖွေနိုင်မည့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ သစ်များဖွဲ့ သည်။(ရှာဖွေသည်)webpage သို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ထို့ နောက် Conferendo ၏ အသုံးပြုသူများပါလိမ့်မည်။ထို့ နောက် Conferendo ၏ အသုံးပြုသူများ database မှာ အသေးစိတ် ရှာဖွေမှုများကို သင် run နိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော site ရှာဖွေမှု ကိုအသုံးပြုရန်၊ Conferendo အ၀င်ပေါက်တွင်သင် login ၀င်ခဲ့ ရမည်ကို သတိပြုပါ။သင်ရွေးချယ်ထားသော chat patner များကို သူ/သူမ၏ profile စာမျက်နှာတွင် တိုက်ရိုက် contact ပြုလုပ်ရန် login ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Chat patner တစ်ယောက်ကို သင်တွေ့ရှိသည့် အခါ၊video communication ကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့်စနိုင်ပါသည်။
(က) Conferendo အ၀င်ဝမှ
Community စာမျက်နှာကို သို့ မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်၏ profile စာမျက်နှာမှ လူ call ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။Logged စနစ်တွင်မြင်နိုင်သော Call button ကို click ပါ။
(ခ)Video messemger လိပ်စာ line မှ
Conferendo screen အထက်ရှိ လိပ်စာ မျဉ်းမှလူ၏ nick ကို ရိုက်ပါ သို့ မဟုတ် copy-paste ပြုလုပ်ပါ။ထို့ နောက် button ကို click နှိပ်ပါ။ .
Video messenger ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင် လိပ်စာ စာအုပ်ကို မြင်နိုင်သည်။Contact စာရင်းမှ ID ကို ရွေးယူကာ၊double-click ပြုလုပ်ပါ။ သို့မဟုတ် button ကို တစ်ဖန်ပြန်လည် အသုံးပြုပါ။ ID ကို right click ပြုလုပ်ပြီး Start Call ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်လည်း Call နိူင်ပါသည်။
Video call တစ်ခုကို အဆုံးသတ်ရန် button ကို click ပါ။ button.
Group video conferences " ၂ x ၁၂၀ "
စတင်အသုံးပြုသူများအတွက် သဘောတရား များ။ "၂ x၁၂၀" mode သည် စင်မြင့်တစ်ခုပါဝင်သော lecture hall အခန်းကြီးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။hall ခန်းထဲတွင် လူ ၁၂၀ ဦးရှိပြီး စင်မြင့်ပေါ်တွင် နေရာ (၂) နေရာရှိပါသည်။ပါဝင်သူများအားလုံးသည် ထို (၂)နေရာကို တစ်ချိန်တည်း မြင်နေရမည်ဖြစ်သည်။ပါဝင်သူများအားလုံးသည် အခြားပါဝင်သူ လူတိုင်းအား massages တိုများ ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Group video conference ကိုစတင်သည့် user ကိုအစီအစဉ်မှူး ၊ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host)အဖြစ်ခေါ်ဆိုပါသည်။Conferences သည် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) စီစဉ်သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။Conferences ကိုဆက်သွယ်ရန် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) ကို Call ရမည်။သို့ မဟုတ် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) ၏ ဖိတ်ခေါ်မှု့ ကို ဖြေကြားရမည် ဖြစ်သည်။(ပုံမှန် incoming call နှင့် တူညီပါသည်)Host သည် ပါဝင်သူအသစ်များအား အလိုအလျောက် လက်ခံခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုတစ်ခုခြင်းစီကို manual mode ဖြင့် အတည်ပြုပေးနိုင်ပါသည်။
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) သည်မည်သည့် ပါဝင်သူကိုမဆို စင်မြင့်သို့ဖိတ်ကြားနိုင်သည်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) မည်သည့်ပါဝင်သူကိုမဆို (to sc quot;kick sc quot;him)Comference မှ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host)သည် ပါဝင်သူအားလုံးကို မြင်နိုင်သည်။
Conferendo software 6.2 version ကတည်းက "၂ x၁၂၀" mode သည် အသုံးပြုနိုင်နေပြီဖြစ်သည်။၎င်းအား ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။၎င်း version (သို့မဟုတ် ပိုပြီး သစ်သော version) အား conference တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ယခု အသေးစိတ် များနှင့် screenshots များ
Group video conference အားစတင်ရန်၊အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) button ကို click ပါ။
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) wizard ကို ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။
သင်ဘာမြင်ရပါသလဲ? Sc quot;2*120 sc quot;group video conference ကို ပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြုပြီး wizard ထဲတွင် ရွေးချယ်ပါ။
Sc quot;2*120 sc quot;Broadcast-ပုံစံ
စတင်အသုံးပြုသည့် user များကို ရွေးချယ်ပါ။အခြားပါဝင်သူများသည် သင်အား call ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် conference ကိုနောက်ပိုင်းတွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Start button ကို နှိပ်ပါ။
Congratulations! သင်၏ group video conference သည်စတင်နေပါပြီ။သင်သည်ထို Conference ၏ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) ဖြစ်သည်။Contact စာရင်းထဲရှိ သင့်အမည်၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် အခြားအသုံးပြုသူများက "star" status ကို မြင်ရပါလိမ့်မည်။
ယခု သင်သည် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host)အဖြစ် တစ်စုံတစ်ယောက်အား (prdium)စင်မြင့်သို့ ဖိတ်ကြားနိုင်ပါသည်။	ပါဝင်သူများစာရင်းမှ "Invite toaPodium" ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပါဝင်သူ၏ အမည်ပေါ်သို့ mouse pointer ထောက်လိုက်လျှင် Menu ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
စင်မြင့် ပေါ်တွင်ပါဝင်သူသည် မသင့် မလျှော်ပြုလုပ်ပါက၊ ဤ menu ရှိ Kick command ကို အသုံးကို အသုံးပြု၍ သူ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
Group video conference ကိုအဆုံးသတ်လိုပါက၊မှုလ video call ထဲမှာကဲ့ သို့၊ main menu မှ "disconnect" button အနီ ကိုနှိပ်ပြီး "stop call" ရန်လိုအပ်သည်။
ယခု conference သို့ ပါဝင်သူ၏ရှုထောင့်မှ မြင်ကြည့်ကြပါစို့ ။အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) ကိုပါဝင်ရန်နည်းလမ်း နှစ်ခုရှိပါသည်။ပထမနည်းလမ်းမှာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) ထံမှ incoming call ကို လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ဒုတိယ option ကတော့ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) ကို call ခေါ်ဆိုရန်ဖြစ်သည်။သင်၏ contact စာရင်းမှ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) ဖြစ်လာပါက သူ၏ status သည် "green ghost " မှ "star " သို့ ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host)က သင်၏တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံသောအခါ သင်သည် conference သို့ဆက်သွယ်မှု ရသွားပါလိမ့်မည်။
(podium)စင်မြင့်ပေါ်မှ လူကိုမြင်သောအခါအောက်ပါ အချက်များကို သင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Broadcasting level ကိုညှိသည် သို့ မဟုတ် ၎င်းကို အသံတိတ် (mute)ပြုလုပ်သည်။
Video feed လက်ခံခြင်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းသည်။
Chat window သို့ မဟုတ် common chat မှ စင်မြင့်ပေါ်မှ ပါဝင်သူကို message ပေးပို့ သည်။
Main Conferendo window မှ ဤ video window ကိုဖြုတ်ချသည်။၎င်း၏အရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲသည်။
၎င်းအားလုပ်ဆောင်ရန်၊ podium(စင်မြင့်) ပေါ်မှ video ပေါ်သို့ mouse ကိုညွန်ပါ။
Lecturer ၏အခန်း မှ နေပြီး သင်ပြုမှုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် selfview window ကိုသွားပါ။"Takeapodium(စင်မြင့်ပေါ်တွင် နေရာယူသည်)", "leave podium(စင်မြင့်မှ ထွက်ခွာသည်)" နှင့် " quot;push to talk (စကားပြောဆိုရန် တိုးထွက်သည်)" button (၃)ခုကို သင်သတိပြုနိုင်ပါသည်။"Takeapodium (စင်မြင့်တွင်နေရာယူသည်)"button ကို push လုပ်လျင် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) ထံသို့ သင်၏တောင်းဆိုမှု့ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) က၎င်းအား လက်ခံလျင်၊ auditory ဖြင့်သင့်ကိုမြင်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်။သင်ပြီး ဆုံးသည့်အခါ "Leave Podium" button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။သင်သည်ပုံမှန် ပါဝင်သူတစ်ယောက် အဖြစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်။
စင်မြင့်(podium) မှ အခြားတစ်ယောက် လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် သင်၏ audio အချက်ပြမှုကို ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် " Push to talk(စကားပြောဆိုရန် တိုးထွက်သည်)"button ကို push လုပ်ပါ။သင်၏ microphone မှ အသံကို conference သု့ ထုတ်လွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။
ပြီးဆုံးရန် ခလုပ်ကို လွတ်လိုက်ပါ။ပါဝင်သူသည် အချိန်တစ်ခုစီတွင် ဤနည်းလမ်းဖြင့် စကားပြောနိုင်ပါသည်။သင်၏ "button သည် active ဖြစ်မနေပါက်၊ဆိုလိုသည်မှာ အခြားတစ်ယောက် (စင်မြင့် (podium)မှ မဟုတ်သည့်) ၎င်း fuction အား အသုံးပြုနေပါက
၎င်း button အစား " space (နေရာ) " button ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဤ remark အတောအတွင်းတွင် စာရင်းထဲရှိ ပါဝင်သူ၏အနီးတွင် အထူးသင်္ကေတ ကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည်။
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) မှထွက်ခွာရန် ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သည် အနီရောင် button ကို push လုပ်ပါ။
ကောင်းမွန်သော video connference ရရှိနိုင်ပါစေ!
text chatting စတင်ခြင်း
Conferendo ကိုအသုံးပြုပြီး အခြားလူများနှင့် လည်း စကားပြောဆို နိုင်ပါသည်။၎င်းအားပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
(က)Main Menu မှတဆင့်
Actions->start chat သို့ သွားပါ။အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာသော window မှ သို့ message ပေးပို့ သည် line ကို click ပါ။ထို့ နောက် drop-down list မှ contact တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
Tool bar မှ
Chat စတင်ရန် button ကို click ပါ။ ထို့ နောက် ပြီးခဲ့ သည့်စာပိုဒ် မှ လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
သင်၏ လိပ်စာ စာအုပ်မှ ID ပေါ်ကို Right click ပြုလုပ်ပါ။ထို့ နောက် Start Chat ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်သည် sever သို့login ပြုလုပ်ပြီးနောက် ၊ လိပ်စာ စာအုပ်သည် အလိုအလျောက် ပွင့်လာပါသည်။ လိပ်စာ စာအုပ် ကို manually ဖွင့်ရန် ၊ ကိုက်ညီ လိုက်ဖက်သည့် tools button ကို click ပါ။ သို့ မဟုတ် Main menu မှ View->လိပ်စာစာအုပ် ကို ရွေးချယ် ပါ။
လိပ်စာစာအုပ်စာရင်းမှ tab (၂) ခုသည် အောက်ပါ လုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပါသည်။
online Users (online အသုံးပြုသူများ ) သည် လက်ရှိ online ပေါ်တွင် ရှိနေသူများ ကိုပြသည်။
အသုံးပြုသူများ အားလုံး သည် သင်၏ လိပ်စာ စာအုပ်ရှိ contacts အားလုံးကို ပြသည်။
user's အမည် ကို double-click ပြုလုပ်ပါက ၎င်း user အား အလိုအလျောက် call ဖြစ်စေပါသည်။
လိပ်စာစာအုပ် window ၏ထိပ်တွင် အောက်ပါ buttons များကိုမြင်တွေ့ နိုင်ပါသည်။
အသစ်ထပ်ပေါင်းသည်။ ကိုသင်၏ လိပ်စာစာအုပ် သို့ ပေါင်းထည့်ရန်အသုံးပြုသည်။
ဖယ်ထုတ်သည်။ ကို သင်၏လိပ်စာ စာအုပ်မှ ဖယ်ထုတ်ရန် အသုံးပြုသည်။
User name ပေါ်သို့right-click လုပ်သည့်အခါ အသုံးပြုနိုင်မည့် items များ
Call သည် video call တစ်ခုကို ပြုလုပ်နိုင်စေသည်။
Start Chat သည် text message ပေးပို့ ရန် ခွင့် ပြုသည်။
အမည်ပြောင်းလဲခြင်း သည်ဖော်ပြထားသော အမည်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ရန် အသုံးပြုသည်။
အသုံးပြုသူကို ဖယ်ရှားသည်။သည် အဆက်အသွယ် (contact)ကိုဖယ်ရှားနိုင်စေသည်။
အသုံးပြုသူ၏ တိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ကိုကြည့်ရှုခြင်း သည် အသုံးပြုသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ အပြင် panel မှ button ကို နှိပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော contact များ ၏အခြေခံ profile သတင်း အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ( at the panel) လိပ်စာစာအုပ်အောက်ပိုင်းမှ အသုံးပြုသူ၏ အသေးစိတ်သတင်း အချက်အလက်များ
Call History window ဖွင့်ရန် Tool bar ထဲမှ button ကိုကလစ်ပါ။
၎င်း feature သည် သင့်အားလတ်တလော လွတ်သွားသော နှင့် လက်ခံရရှိခဲ့ သော call များကို မြင်နိုင်ပါသည်။Call History စာရင်းမှ call တစ်ခုဆီသို့ ပြုရန် ၊လိုက်ဖက်သည့် အ၀င် (entry) ကို double-click ပြုလုပ်ရုံသာဖြစ်သည်။
အ၀င်( entry) ကို right-click ပြုလုပ်သည့်အခါ အသုံးပြုနိုင်မည့် items များ
လိပ်စာ စာအုပ် သို့ ပေါင်းထည့်သည် သည် cal list မှ contact တစ်ခုအား သင်၏လိပ်စာ စာအုပ် သို့ ပေါင်းထည့်ရန် ခွင့်ပြုသည်။
အသုံးပြုသူ၏ တိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ကိုကြည့်ရှုခြင်း သည် အသုံးပြုသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ အပြင် panel မှ button ကို နှိပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော contact များ ၏အခြေခံ profile သတင်း အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ( at the panel) လိပ်စာ စာအုပ်၏ အောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုသူ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ
video conference ၏ မှတ်တမ်း
၎င်း function သည် မှတ်တမ်းတင် (recording) ပြုလုပ်နိုင်စေသည်။
Conference အတွင်း နှင့် ပြင်ပတွင် သင်၏ကိုယ်ပိုင် video ပုံရိပ်နှင့် စကားများ၊
သင်၏ conference partner ၏ video ပုံရိပ် နှင့် စကားများ၊
Conference အချိန်တွင် သင်နှင့် သင့် partner ၏ video ပုံရိပ် နှင့် စကားများကို record ပြုလုပ်နိုင်သည်။conference ပြင်ပတွင် သင်၏ကိုယ်ပိုင် video ပုံရိပ် (seft view) ကိုသာ record ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
video conference ၏ မှတ်တမ်း window ကို ဖွင့်ရန်၊ လိုက်လျောညီထွေသော toolbar button ကို click ပါ။ .
Video conference ၏မှတ်တမ်း window ကို open သည့်အခါ၊ program သည် recording ပြုလုပ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ပထမဦးဆုံး အနေဖြင့် မူရင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း dropping list မှ သင်မှတ်တမ်းရယူ ချင်သည် user တစ်ယောက်၏ အမည် ကိုရွေးပါ။သင်၏ကိုယ်ပိုင် video ပုံရိပ် မှတ်တမ်းတင်မှု့ကိုတော့ မိမိကိုယ် မိမိ video မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဖြင့် အမှတ်အသားပြုပါသည်။
Video ပုံရိပ် မူရင်းကိုသင်ရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း အလုပ်အားစတင်ရန် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းစတင်သည် button ကို click ပါ။
သင်၏ video ပုံရိပ်အား မှတ်တမ်းတင်နေစဉ်တွင် messenger's video area ၏ အပေါ် ဗယ်ဘက်ထောင့်တွင် icon တစ်ခုကို သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်။
Video conference ၏မှတ်တမ်း window တွင် မှတ်တမ်းတင်နေသည့် file ၏ အမည်၊စတင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှ အစပြုပြီး ကြာမြင့်သည့်အချိန် တို့ ကို ဖော်ပြနေပါလိမ့်မည်။
မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို stop button ကို click ခြင်းအားဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးပြီးနောက် မှတ်တမ်းတင်ထားသော video file အား အလိုအလျောက် play နိုင်ရန် ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။
Video Conference ၏ မှတ်တမ်း window တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော file ၏ အမည်ကိုသင်မြင်ရ ပါလိမ့်မည်။application ၏ main window တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော file ၏ပထမဆုံး video frame ကို ဖော်ပြပေးနေပါလိမ့်မည်။ messenger's video area၏ အပေါ်ဘယ်ဘက်ထောင့်တွင် icon တစ်ခုပေါ်နေပါလိမ့် မည်။
မှတ်တမ်းတင်ထားသော video file အား play ရန် play button ကို Click ပါ။ Application ၏ main window မှ messenger's video area ၏ ဘယ်ဘက် ထောင့်တွင် icon တစ်ခုပေါ်နေပါလိမ့်မည်။
Video conference ၏ မှတ်တမ်း window တွင် playing စတင်သည့် အချိန်မှ အစပြုပြီးဖြတ်သန်းခဲ့ သည့် အချိန်ကို ဖော်ပြပေးနေပါလိမ့်မည်။
Video file playing အား ရပ်ရန် နှင့် ၎င်း၏ စမှတ်သို့ ဖြန့် သွားရန် ရပ်သည် button ကို press ပါ။
လက်ရှိ video frame အား ပြောင်းလဲခြင်းမပြုလုပ်ဘဲ ရပ်တန့်ရန် ဆိုင်းငံ့သည် button ကိုနှိပ်ပါ။ application ၏ main window တွင် play နေသော video frame ကိုဖော်ပြနေပါလိမ့်မည်။ messenger's video area ၏ အပေါ် ဘယ်ဘက်ထောင့်တွင် icon တစ်ခု ပေါ်နေပါလိမ့်မည်။၎င်း video file အားပြန်လည် စတင်ရန် play button ကို တစ်ကြိမ်ထပ် နှိပ်ပါ။
မှတ်တမ်းအသစ်တစ်ခုအား ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လက်ရှိ file ကို ဖယ်ထွက်သည် button ကို နှိပ်ပါ။
Play နေသည့် video file ကို အခြားတစ်ခုသို့ မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို ပြောင်းလဲနိူ်င်ပါသည်။ Open button ကို နှိပ်ပါ။
Video file ကို အခြားအမည်ပေးရန်၊အခြား directory အောက်တွင် သိမ်းရန် Save asbutton ကို နှိပ်ပါ။
သင်၏ computer တွင် default အဖြစ် ထည့်သွင်းထားသည့် (ဥပမာ outlook) ကဲ့သို့သင်၏ Mail User Agent ကို အသုံးပြုလျက် video file ကို email ဖြင့်ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။Video mail button ကို နှိပ်ပါ။Video file's အမည် ၊လမ်းကြောင်း၊ အရွယ်အစားတို့ ကို ဖော်ပြလျက် dialog window တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
Templateသည် သင့်အား video letter ၏ စာသား နှင့် အကြောင်းအရာကို နှစ်လိုဖွယ် ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။
Setting ကို save လုပ်ရန်နှင့် video letter ပြုလုပ်ရန် Mail ပြုလုပ်သည် button ကို နှိပ်ပါ။သင်၏ email client နည်းလမ်းဖြင့် စာကို ဖန်တီးပါလိ့မ်မည်။
Recording သတ်မှတ်ချက်များကို ပြောင်းလဲရန် Recording settings button ကိုနှိပ်ပါ။အောက်ပါရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရန် dialog window ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
လမ်းကြောင်း သည် သင်၏ video file အား သိမ်းဆည်း ရန် folder ရွေးချယ်ရန် ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။keyboard ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊browse button ကို နှိပ်ပြီး folder ကို ရွေးချယ် ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း လမ်းကြောင်း ကို သွင်းနိုင်ပါသည်။
conference party တစ်ခုအတွင်း video မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ခွင့်ပြုသည် option သည် video ပုံရိပ်အား မှတ်တမ်းတင်ရန် ခွင့်ပြုမှု့အတွက် အသုံးချလျက်၊ အဆင့်တူ ပါဝင်သူတို့ အား 's အလိုအလျောက် ပေးမည့် အဖြေကို set up လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
application start အပေါ်	ဤ association အတွက် အမြဲတမ်းစစ်ဆေးသည် - option သည် Conferendo နှင့် association ပြုလုပ်ထားမှုရှိသလား စစ်ဆေးရန် ဖွင့်ထားသည်။
Microphone နှင့် sound ပြသနာများ အဖြေ ရှာ ဖြေရှင်းခြင်း
သင်၏ system ပေါ်တွင် microphone ကဲ့ သို့မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်း တို့ကို သုံးသည့် application နှင့် အဆင်ပြေစေရန်၊သင်၏ system ကို ရောနှော တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။အောက်ပါ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် လမ်းညွန်မှု့သည် Microsoft Windows 98/Me/2000/XP systems များ အတွက် ရေးထားပါသည်။သင်ထံတွင် အခြား system ရှိနေပါက သတိပြုမိစေလိုပါသည်။
မှတ်တမ်းအား ပြန်လည် ကြည့်ရှု့ခြင်း ဂုဏ်သတ္တိများ အစီအစဉ် စနစ်
1. start->Runmenu ကို ရွေးချယ်ပါ။dialog window တွင် sndvol32ကို ၀င်ရောက်ပြီး OKကို နှိပ်ပါ။သို့မဟုတ် သင်၏ system Volume Control သို့ သွားပါ။ start->program->Accessories->Entertainment->Volume Control
နောက်ထပ် dialog window Volume Controlကို သင် မြင်ရလိမ့်မည်။
Mic Volume(သို့ မဟုတ် Microphone)microphone panel မရှိလျှင် ၎င်းကို ခွင့်ပြုရန် လိုအပ်သည်။Options->Adjust volume for->Playback ကို ရွေးချယ်ပါ။ show the following volume controls; ထဲရှိ Mic volume (သို့ မဟုတ်Microphone)၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ box ကို check လုပ်ပါ။ OK button ကို click လုပ်ပါ။
Microphone တွင် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် မှတ်တမ်းအားပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်း channels များအတွက် ခြားနားသော ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါသည်။microphone မှ မှတ်တမ်းအားပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်း (sound playback) ကို disable လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ထိုသို့ မပြုလုပ်ပါက စကားပြောနေစဉ်အတွင်း သင်၏ speaker သို့မဟုတ် headphone တို့မှ သင်၏ အသံကို ပြန်လည်ကြားနေမည် ဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည် parasitic hiss ရှူးရှူးရှဲရှဲ အသံများ) နှင့် echo သံများကို ဖြစ်စေပါသည်။ Microphone playback ကို disable ပြုလုပ်ရန် screenshot တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Volume controlwindow ထဲရှိ mic Volume( သို့မဟုတ် Microphonepanel ထဲရှိ mutecheckbox ကို set လုပ်ပါ။
Volume Control panel မှ Mute all ကို set မလုပ်ရန် သို့မဟုတ် Wave panel မှ Mute set မလုပ်ရန် သေချာပါစေ။
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဂုဏ်သတ္တိများ အစီအစဉ်စနစ်
ကျေးဇူးပြု၍ Playback Properties Configuration ပိုင်းမှ first step ကို repeat ပြုလုပ်ပါ။
Recording Control window ကို ဖွင့် ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Options -> Adjust volume for -> Recording ကိုရွေးချယ်ပါ။ Show the following volume controls: list ထဲရှိ Mic Volume (or Microphone) line ၏ မျက်နှာချင်းဆိုင် box ကို check လုပ်ပါ။ Ok button ကို click ပါ။
Recording Control window မှ Mic Volume (or Microphone) panel ထဲရှိ ရွေးချယ်ထားသောSelect checkbox ကိုသေချာပါစေ။
Sound cards အများစုသည် Microphone Boost fecture ကို အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။ ၎င်းသည် microphone ၏ sensitivity ကိုမြင့် တင်ရန်ခွင့် ပြုသည်။ ၎င်းသည် headsets တွင်အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည့်passive microphones များအတွက် အထူးသင့် တော်သည်။ microphone sensitivity အခက်အခဲများတွေ့ ရှိပါက အောက်ပါ အချက်များအတိုင်းပြုလုပ်ပါ။
Playback Properies configuration (မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဂုဏ်သတ္တိများ အစီအစဉ်စနစ် အပိုင်းမှ အဆင့် ကိုကျေးဇူးပြု၍ repeat လုပ်ပါ။
Mic Volume (သို့မဟုတ် Microphone panel ထဲမှ Advanced button ကို click ပါ။
Microphone Boost checkbox ကို ဤနေရာတွင် မြင်လျှင် ၊ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကို select လုပ်ပါ။
အချို့ system များတွင် special sonund drivers များ ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် အခြား နာမည် တစ်မျိုး ဖြင့် Mic Boost ရှိနေနိုင်သည်။